ထမင်းပေါင်း | Wutyee Food House
« ကြက်သားကင် ဆလတ်သုတ်
February 21, 2012 by chowutyee
၁။ ချက်ပြီးသားထမင်း (ဆန်၁လုံး)
၂။ ကြက်ရင်ဗုံသား – ၁၀ကျပ်သား (အပါး စောင်းလှီးပါ)
၃။ ကြက်အသဲမြစ် – ၂စုံ (အပါး စောင်းလှီးပါ) (optional)
၄။ ငါးဖယ်လုံး – ၅လုံး (Market များတွင်ဝယ်နိုင်သည်) (optional)
၅။ မုန်လာဥနီ – ၅ကျပ်သား (အပါး စောင်းလှီးပါ)
၆။ ပြောင်းဖူး အသေး – ၅ကျပ်သား (အပါး စောင်းလှီးပါ)
၇။ ဘိုစားပဲ – ၅ကျပ်သား (အပါး စောင်းလှီးပါ)
၈။ မှို- ၅ကျပ်သား (အပါး စောင်းလှီးပါ)
၉။ ငုံးဥ – ၅လုံး ( ပြုတ်ပြီးသား)
၁၀။ မျှစ် – ၂ခု (အရှည်ပါးပါးလှီးပါ)
၁၀။ ခရုဆီ – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၁၁။ ကြက်ပြုတ်ရည် (သို့) ရေ – ၄ခွက်
၁၂။ ဆား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း
၁၃။ ကြက်သားမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း
၁၄။ သကြား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း
၁၅။ ခရမ်းချဉ်သီး – ၂လုံး (အစေ့ထုတ် ၈စိပ်စိပ်ပါ)
၁၆။ ကြက်သွန်ဖြူ – ၂မွှာ (ထောင်းပါ)
၁၇။ ကြက်သွန်နီ – တ၀က် (ထောင်းပါ)
၁။ ကြက်သားကို ဆား (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်)၊ ကော်မှုန့် (စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း) ထည့်နုယ်ပေးပါ။
၂။ ထို့နောက် ဒယ် (Non-Stick pan) ထဲသို့ ဆီဆီများများထည့်ကာ ကြက်သားကို အညှိရောင်သန်းလာအောင် မီးအသင့်တင့်ဖြင့် ကြော်ပေးပါ။ ကြက်သားများကို ဇကာဖြင့် ဆီစစ်ပြီး ပန်းကန်ပြားတစ်ခုထဲ ထည့်ထားပေးပါ။
၃။ ဒယ်ထဲ ဆီ (စားပွဲတင်ဇွန်း ၄ ဇွန်း) ထည့်၊ ဆီပူလာလျှင် ထောင်းထားသော ကြက်သွန်ဖြူ (၂မွှာ)၊ ကြက်သွန်နီ တ၀က် ထည့် အညှိရောင် သန်းလာသည် အထိ ဆီပူထိုးပေးပါ။
၄။ ပြီးလျှင် ငါးဖယ်လုံး၊ ကြက်အသဲအမြစ်၊ ပါဝင်သော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို ၁မိနစ်ခန့် ကြော်ပေးပါ။ ကြက်ပြုတ်ရည် (သို့) ရေကို ထည့်ပြီး မွှေပေးပါ။
၅။ ထို့နောက် ကြော်ထားသော ကြက်သား၊ ငုံးဥ၊ ခရုဆီ၊ ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်၊ ထည့်ကာ ဟင်းရွက်များ နူးလာသည် အထိ မီးပြင်းပြင်းဖြင့် တည်ထားပါ။ ပြီးလျှင် အပေါ့အငံ မြည်းကြည့်ပါ။
၅။ အပေါ့အငံ အနေတော်ပါက ပုံတွင်ပါသည့်အတိုင်း မီးပြင်းပြင်းဖြင့် ရေကို များများအနေထားတွင် ဖျော်ထားသော ကော်ရည်ကို ထည့် မွှေပေးပါ။
မှတ်ချက်။ ။ ကော်ရည်သည် မပျစ် မကျဲ အနေထားတွင် ရှိနေရမည်။ ကော်ရည် အရမ်းပျစ်သွားလျှင် ရေအနည်းငယ် ထပ်ထည့်ပေးပါ။ ကော်ရည် ကျဲနေလျှင် ကော်မှုန့်အနည်းငယ် ဖျော်ကာ ထည့်ပေးပါ။
၆။ ထို့နောက် ထမင်းပူပူကို ပန်းကန်လုံးထဲထည့် ကာ ထမင်းစားပန်းကန်ပြားထဲသို့ မှောက်ထည့်ပေးပါ။ ပြီးလျှင် ကြော်ထားသော ဟင်းရွက်များကို ထမင်းပေါ်သို့ လောင်းပေးပါ။
ရ။ ပူပူနွေးနွေးနဲ့ ထမင်းပေါင်းကို အဆင့်သင့် စားသုံးနိုင်ပါပြီး။
Posted in တရုတ်ဟင်း ချက်ပြုတ်နည်း, အဓိက ဟင်းလျာများ | 22 Comments
on December 19, 2009 at 8:25 am | Reply myintkt
This recipe is even better than usual steamed rice you can get from the small Chinese restaurants! If you like steamed rice like I do, this isareally good recipe to cook at home! My recommendation 😀
on December 22, 2009 at 11:10 am | Reply Hmone Gyi
really…cool bro..i really evny you as u can eat everyday…i can eat everyday too if u and pig yee will come to uk hee 😀 will try today 😉
on December 23, 2009 at 4:28 am myintkt
@Hmone Gyi, if you eat like me, you will be fat in no time – just like me 😛
on March 1, 2010 at 2:24 am | Reply shwe zin
I cook as your method. This is my first experience to cook hta min poung. My husband like so much my one. Thank for your kindness. You are my teacher.
on March 1, 2010 at 3:18 am | Reply chowutyee
ရွှေဇင် မြှောက်ပြောလွန်းလို့ ဘယ်လိုနေရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး.. ဟဲဟဲ… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလို ၀တ်ရည် ဟင်းတွေကို ချက်လို့လည်း ရွှေဇင်ကို အရမ်းကျေဇူးတင်ပါတယ်.. ဟင်းကောင်းတယ်ဆိုတာ ရွှေဇင်တော်လို့ပါ ၀တ်ရည်က ချက်နည်းပဲပြောပြတာပါ။.. heee 😉
on September 5, 2010 at 3:32 pm | Reply Nandar
My husband love to eat wet rice.I’ll cook for him during my off day.May be tomorrow.Thanks ma wutyee.you are wonderful:)
on September 6, 2010 at 3:23 am | Reply chowutyee
Ma Nandar ဒီထမင်းပေါင်းက တကယ် စားလို့ အရမ်းကောင်းပါတယ်.. လုပ်စားကြည့်ပါနော်… ၀တ်ရည်တောင် ထပ်လုပ်စားကြည့်မလို့… မနက်ဖြန်လောက်ပဲ တူနေပြီ… ဟီးဟီး… 🙂
on September 14, 2010 at 2:59 pm | Reply Nandar
I was busy and couldn’t come to ur site last few days.But I have tried to cook this dish for me and my husband.U know my husband like it so much.He told me that this is so much more delicious than the one that we used to buy outside.Thanks Naw:)
on September 16, 2010 at 3:41 am | Reply chowutyee
စားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာ မနန္ဒာကိုယ်တိုင်ကလည်း ဟင်းချက်တော်လို့ပါနော်… ထမင်းပေါင်းကို ၀တ်ရည်လည်း ကြိုက်တာမို့ ၂ရက်ဆက်တိုက်တောင် လုပ်စားဖြစ်သေးတယ်… ဟဲဟဲ… Thanks! 😛
on September 17, 2010 at 1:29 am | Reply Aye
I like it so much. Thanksalot for the recipe… 🙂
on February 22, 2012 at 8:08 am | Reply chowutyee
on September 17, 2010 at 8:26 pm | Reply pn
I was thinking to make thatafew days ago, and now I gotarecipe, thanks sister..
on September 17, 2010 at 8:47 pm | Reply pn
btw, add some tomatoes to get red colouring and sour flavour..
on September 19, 2010 at 7:26 am | Reply chowutyee
PN ရေ အပြင်မှာ အရောင်ရော၊ အရသာပါ ကောင်းပါတယ်.. လုပ်စားကြည့်ပါနေနာ်… 🙂
on February 22, 2012 at 8:17 am | Reply သင်းသင်း
on February 22, 2012 at 8:47 am | Reply chowutyee
သင်းသင်း လုပ်စားကြည့်ပါနော်.. အားပေးနေတယ်ဆိုလို့ ၀တ်ရည်ကလည်း ကျေးဇူး
on February 22, 2012 at 4:41 pm | Reply ခင်ယမုံ
on February 25, 2012 at 6:18 pm | Reply chowutyee
ဟုတ်ကဲ့ မခင်ယမုံ လုပ်စားပါနော်.. Thanks also par:)
on March 26, 2012 at 7:28 am | Reply မွန်မွန်အောင်
၀တ်ရည်ရေ … ၀တ်ရည်ရဲ့ နည်းနဲ့ မနေ့က အိမ်မှာ ထမင်းပေါင်း လုပ်စားဖြစ်သွားပြီ။ အိမ်က လူတွေလည်း စားကောင်းကြလို့ ၀တ်ရည်ကို အရမ်း ကျေးဇူးတင်တယ်နော်။ :)))
၀တ်ရည်ကလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်… တခြားမုန့်လုပ်နည်းတွေလည်း လုပ်စားကြည့်ပါအုန်းနော်.. 🙂
[…] February 21, 2012 ထမင်းပေါင်း […]
on April 17, 2015 at 12:04 pm | Reply shwe sin
အမဟင်းချက်​နည်း​တွေ လုပ်​စားရလွန်းလို့ လူလည်းဝလာပြီ။ဒါ​ဗေမဲ့ သမီးတို့ညီအမနှစ်​​ယောက်​အ​မေဆုံးပြီးတဲ့​နောက်​ပိုင်းအမကဆရာပဲ။​ကျေးဇူးတင်​စွာဖြင့်​အမြဲအား​ပေး​နေမဲ့…..🍱🍴�🍱